Sergio Ramos oo ku camirtay jabkii Barcelona kasoo gaaray PSG
Home Sports Sergio Ramos oo ku camirtay jabkii Barcelona kasoo gaaray PSG
Sergio Ramos ayaa shaaca ka qaaday inuu ku faraxsanyahy gool daradii soo gaartay kooxda Barcelona tartanka Champions league taasoo ay xusdi mudantahay in ay Real Madrid ay u awood shegayatay kooxda Napoli.
Ma Jiro qof ay ka qarsanatahy cadaawada ka dhaxeysa kooxaha Barcelona iyo Real Madrid kuwaasoo magac weyn ku leh qaarda yurub waxana looga bartay in ay kooxahan ay iska daldashaan tartanka qaarada yurub balse ay Barcelona xili madoow u tahay sanadan.
Barca ayaa la calaamadeynayaa in ay ku hartay wareega 16-ka ee tartanka Champions league halka Real Madrid ay cadahay in ay usoo gudubtay wareega xiga ee tartanka Champions League maadaama ay 3-1 uga adkaatay kooxda Napoli.
“Hadii lii waydiiyo maku faraxsantahy guuldarada kooxda Barca ee kasoo gaartay kooxda PSG waxaan leeyahy haa, ma jecli inaan arko asxaabteyda oo murugeesan balse ma jecli in ay Barca guuleysato”ayuu yiri kabtanka kooxda Real Sergio Ramos.
Xidigii hore koxoda Real Madrid Angel Di Maria ayaa saameyn weyn kulaha guushii ay gaartay kooxda PSG ka dib markii labo jeer shabaqa soo taabtay xidigan asigoo u dabaal dagaya dhalashadiisa balse Ramos ayaa sheegay in ay layaab aysan ahayn midaas.
“ilama ahan in ay layaab tahay midaas, micnaha Champions league ayaba sidaa ah koox walba wey guuldareysanaysaa midna wey guuleysaneysaa PSG ciyaar wanagsa ay soo bandhigtay waxeyna awooda weyn ay ahayd weerarka kooxda”ayuu kusii dara Ramos.